Madaxwayne Farmaajo muxuu ka yiri ansixintii golaha shacabka matalaadda G/Banaadir ee Aqalka Sare? - Tilmaan Media
Qoraal kasoo baxay Villa Soomaaliya ayaa madaxwayne Farmaajjo wuxuu kusoo dhaweeyay meel marinta 13 xubnood ee Gobolka Banaadir ku yeelanayo Aqalka Sare ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxaa lagu yiri:
Madaxweyne Farmaajo oo uga mahadceliyey Goddoonka iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka fulinta codsigiisii ku aaddanaa Matalaadda Siyaasadeed ee Gobolka Banaadir.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyey Guddoonka iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya tixgelinta iyo fulinta codsigii Madaxweyne ee ku aaddanaa xaqiijinta Matalaadda siyaasadeed ee Gobolka Banaadir, taas oo uu ku soo jeediyey furitaankii Kal-fadhigii 7aad ee Baarlamaanka.
Sidoo kale, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyey in mataaladda siyaasadeed ee Gobolka Banaadir uu ku yeelanayo Aqalka Sare oo maanta ay ansixiyeen Golaha Shacabku ay noqoto mid adkeysa dowladnimadeenna taabo galka ah iyo dib u dhiska dalkeenna”
Xaliimo Yareey oo dalbattay wakhtiga loo kordhiyo